१५ मंसिरबाट गोलाप्रथा लागू गर्ने सर्वोच्च फुलकोर्टको निर्णय, के गर्ला अब बार ? « Etajakhabar
१५ मंसिरबाट गोलाप्रथा लागू गर्ने सर्वोच्च फुलकोर्टको निर्णय, के गर्ला अब बार ?
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतमा १५ मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोकिने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबाहेकका न्यायाधीशहरूको फुलकोर्टको बिहीबार बसेको बैठकले १५ मंसिरबाट गोलाप्रथाबाट मु द्दाको पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल बार एसोसीएसनको जबराको राजीनामा माग्दै भएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेका थिए । तर, गोलाप्रथा लागु गर्ने भएपछि न्यायाधीश इजलास फर्किए पनि बार भने आन्दोलनमै छ । यस्तै ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेका मु द्दालाई पनि सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको एक न्यायाधीशले जानकारी दिए ।